လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်ဖို့ပိတ်ရက်တွင်လုပ်သင့်သောအချက်(၇)ချက် - For her Myanmar
အလုပ်မှ အလုပ်ချည်း ဖိလုပ်နေလို့ မရဘူးနော် ယောင်းတို့..
ငယ်ငယ်က ကြုံခဲ့ဖူးတယ်ဟုတ်? စာပြီး စာ၊ တစ်ချိန်လုံး စာကျက်နေရရင် ဟုန်သွားပြီး စာတွေ မရတော့ဘဲ ခဏနားပြီး ဦးနှောက်အေးသွားတဲ့အချိန် ပြန်ကျက်တော့မှ စာတွေ ရသွားတာမျိုးလေ… လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း ဒီလိုပါပဲ ယောင်းတို့ရေ.. ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာလည်း အလုပ်လုပ်၊ ပိတ်ရက်တွေမှာလည်း အလုပ်လုပ်၊ တစ်ချိန်လုံး အလုပ်မှ အလုပ် ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် လူက အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းတွေပဲ ရှိပြီး အလုပ်ပြီးနိုင်စွမ်းက လျော့သွားပါလိမ့်မယ် ယောင်းတို့ရေ… စိတ်ဖိစီးမှုတွေလည်း ပိုများလာနိုင်တာပေါ့နော်..
ဒီတော့ အလုပ်လုပ်တာလည်းလုပ်၊ နားချိန်မှာလည်း နား၊ ပျော်ချိန်မှာလည်း ပျော် မျှမျှတတလေး ဖြတ်သန်းသွားဖို့ လိုပါတယ်လို့… ဒါဆို လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်း အောင်မြင်အောင်၊ ကိုယ့်အတွက် အနားယူချိန်တွေမှာလည်း အကျိုးလည်းရှိ၊ အနားလည်း ရအောင် ပိတ်ရက်တွေမှာ ဘာလေးတွေ လုပ်သင့်လဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးမယ်နော် ယောင်းတို့…
၁။ ပိတ်ရက်တွေဆို အလုပ်နဲ့ဝေးနိုင်သလောက် ဝေးဝေးနေပါ။
ဟုတ်ပါတယ် ယောင်းတို့ရေ… ပိတ်ရက်မှာ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို မေ့ထားလိုက်ပါ။ လုံးဝ မေ့ထားလိုက်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့နော်… အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဝါသနာ ပါတာတွေ၊ ကိုယ် စိတ်ဝင်စားတာတွေ၊ ကိုယ့်အတွက် စိတ်သက်သာရာ ရစေမယ့် အရာလေးတွေ လုပ်ကြည့်ရင်း ကောင်းကောင်း အနားယူလိုက်ပါ။ ဒီလို အနားယူလိုက်ပြီးရင်တော့ ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာ ပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်တာကို တွေ့ရမှာပါ ယောင်းတို့ရေ…
၂။ မိသားစုနဲ့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို အချိန်ပေးပါ။
ရုံးဖွင့်ရက်တွေဆို အလုပ်နဲ့အိမ် အိမ်နဲ့အလုပ် ဒါတွေပဲ နေ့တိုင်းလည်ပတ်နေတော့ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို အချိန်ပေးဖို့ မေ့ကောင်းမေ့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ ပိတ်ရက်တွေကို အခွင့်အရေးအဖြစ် အသုံးချလိုက်ပါ ယောင်းတို့ရေ.. ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေ၊ မိသားစုတွေကို အချိန်ပေးပြီး စကားပြောမယ်၊ မုန့်တွေ လုပ်စားကြမယ်၊ ပျော်ပွဲစားထွက်မယ်ဆိုရင် ယောင်းရဲ့ ဘဝလေးက ပိုပြီး စိုပြည်လာပါလိမ့်မယ်။
Related Article >>> Introvert တွေအတွက် လုပ်ငန်းခွင် ကွန်ရက်ဖြန့်ကျက်နည်း (၆) သွယ်
ပိတ်ရက်တွေမှာ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေ၊ email တွေကို လုံးဝပိတ်ထားလိုက်ပါ။ ဘာလို့ဆို Notification တက်လာရင် သွားကြည့်မိပြီး မလုပ်ဘဲလည်း မနေနိုင်ပြန်ဘူးလေ.. သံယောဇဉ်အမျှင်တွေ တန်းတာ၊ တန်းတာဆိုတာ… အဲလိုမျိုးသာဆို အလုပ်ဖွင့်ရက် ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလည်း အရင်လို ပင်ပန်းမြဲ၊ အာရုံမစိုက်နိုင်ဆဲ ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။
၄။ ထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဖန်တီးပါ။
ထူးခြားပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ အရာတစ်ခုကို စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ (တောင်တက်တာတို့၊ စွန့်စားခရီးထွက်တာတို့ပေါ့) တစ်ခါမှမလုပ်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေက စိတ်ကူးသစ်လေးတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အိုင်ဒီယာအသစ်တွေကို ဖန်တီး လုပ်ဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပိတ်ရက်တွေမှာ ပရဟိတလုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်တွေ၊ သည်းခံညှာတာမှုတွေ၊ လူမှုဆက်ဆံရေးတွေ တိုးတက်လာစေလို့ လုပ်ငန်းခွင် ဆက်ဆံရေးမှာ အဆင်ပြေစေမှာပါနော်။ ပရဟိတကနေ သူငယ်ချင်းသစ်၊ မိတ်ဆွေသစ်တွေလည်း တိုးလာတော့ Network ကျယ်လာနိုင်တာပေါ့နော်..
Related Article >>> လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်များ
၆။ သင်တန်းတစ်ခုခု တက်ပါ။
ပိတ်ရက်တွေမှာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် တိုးတက်စေမယ့် ပညာရပ်တွေ၊ ဘာသာစကားတွေ၊ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေ စသဖြင့် ပညာရပ်တစ်ခုခုကို သင်ယူပါ။ ဒါဆို ပိတ်ရက်တွေမှာ ပညာသစ်တွေ တိုးပြီပေါ့..
ဒါက ဗုဒ္ဓဘာသာမှ မဟုတ်ပါဘူးနော်… လူတိုင်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ စိတ်ကို ပိုပြီး တည်ငြိမ်စေသလို အာရုံစူးစိုက်မှုလည်း ပိုအားကောင်းစေပါတယ်။ ရုံးဖွင့်ရက်တွေမှာ ပင်ပန်းလို့ မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် ပိတ်ရက်တွေမှာ အချိန်ခဏပေးပြီး တရားထိုင်ကြည့်ပါ။
ဒီအချက်လေးတွေကို ပိတ်ရက်တွေမှာ အချိန်ပေးပြီး လုပ်မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး လုပ်ငန်းခွင် အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ် ယောင်းတို့ရေ…
References : Inc , Forbes
အလုပျမှ အလုပျခညျြး ဖိလုပျနလေို့ မရဘူးနျော ယောငျးတို့..
ငယျငယျက ကွုံခဲ့ဖူးတယျဟုတျ? စာပွီး စာ၊ တဈခြိနျလုံး စာကကျြနရေရငျ ဟုနျသှားပွီး စာတှေ မရတော့ဘဲ ခဏနားပွီး ဦးနှောကျအေးသှားတဲ့အခြိနျ ပွနျကကျြတော့မှ စာတှေ ရသှားတာမြိုးလေ… လုပျငနျးခှငျမှာလညျး ဒီလိုပါပဲ ယောငျးတို့ရေ.. ရုံးဖှငျ့ရကျတှမှောလညျး အလုပျလုပျ၊ ပိတျရကျတှမှောလညျး အလုပျလုပျ၊ တဈခြိနျလုံး အလုပျမှ အလုပျ ဖွဈနမေယျဆိုရငျ လူက အလုပျလုပျနိုငျစှမျးတှပေဲ ရှိပွီး အလုပျပွီးနိုငျစှမျးက လြော့သှားပါလိမျ့မယျ ယောငျးတို့ရေ… စိတျဖိစီးမှုတှလေညျး ပိုမြားလာနိုငျတာပေါ့နျော.. ဒီတော့ အလုပျလုပျတာလညျးလုပျ၊ နားခြိနျမှာလညျး နား၊ ပြျောခြိနျမှာလညျး ပြျော မြှမြှတတလေး ဖွတျသနျးသှားဖို့ လိုပါတယျလို့…
ဒါဆို လုပျငနျးခှငျမှာလညျး အောငျမွငျအောငျ၊ ကိုယျ့အတှကျ အနားယူခြိနျတှမှောလညျး အကြိုးလညျးရှိ၊ အနားလညျး ရအောငျ ပိတျရကျတှမှော ဘာလေးတှေ လုပျသငျ့လဲဆိုတာ ဖျောပွပေးမယျနျော ယောငျးတို့…
၁။ ပိတျရကျတှဆေို အလုပျနဲ့ဝေးနိုငျသလောကျ ဝေးဝေးနပေါ။
ဟုတျပါတယျ ယောငျးတို့ရေ… ပိတျရကျမှာ အလုပျနဲ့ ပတျသကျတာတှကေို မထေ့ားလိုကျပါ။ လုံးဝ မထေ့ားလိုကျနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့နျော… အဲဒီအခြိနျမှာ ကိုယျဝါသနာ ပါတာတှေ၊ ကိုယျ စိတျဝငျစားတာတှေ၊ ကိုယျ့အတှကျ စိတျသကျသာရာ ရစမေယျ့ အရာလေးတှေ လုပျကွညျ့ရငျး ကောငျးကောငျး အနားယူလိုကျပါ။ ဒီလို အနားယူလိုကျပွီးရငျတော့ ရုံးဖှငျ့ရကျတှမှော ပိုပွီး အာရုံစိုကျနိုငျတာကို တှရေ့မှာပါ ယောငျးတို့ရေ…
၂။ မိသားစုနဲ့ ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှကေို အခြိနျပေးပါ။
ရုံးဖှငျ့ရကျတှဆေို အလုပျနဲ့အိမျ အိမျနဲ့အလုပျ ဒါတှပေဲ နတေို့ငျးလညျပတျနတေော့ ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှကေို အခြိနျပေးဖို့ မကေ့ောငျးမနေ့တေတျကွပါတယျ။ ဒီတော့ ပိတျရကျတှကေို အခှငျ့အရေးအဖွဈ အသုံးခလြိုကျပါ ယောငျးတို့ရေ.. ကိုယျခဈြရတဲ့သူတှေ၊ မိသားစုတှကေို အခြိနျပေးပွီး စကားပွောမယျ၊ မုနျ့တှေ လုပျစားကွမယျ၊ ပြျောပှဲစားထှကျမယျဆိုရငျ ယောငျးရဲ့ ဘဝလေးက ပိုပွီး စိုပွညျလာပါလိမျ့မယျ။
Related Article >>> Introvert တှအေတှကျ လုပျငနျးခှငျ ကှနျရကျဖွနျ့ကကျြနညျး (၆) သှယျ
ပိတျရကျတှမှော အလုပျနဲ့ဆိုငျတဲ့ ဖုနျးတှေ၊ email တှကေို လုံးဝပိတျထားလိုကျပါ။ ဘာလို့ဆို Notification တကျလာရငျ သှားကွညျ့မိပွီး မလုပျဘဲလညျး မနနေိုငျပွနျဘူးလေ.. သံယောဇဉျအမြှငျတှေ တနျးတာ၊ တနျးတာဆိုတာ… အဲလိုမြိုးသာဆို အလုပျဖှငျ့ရကျ ပွနျရောကျလာတဲ့အခါမှာလညျး အရငျလို ပငျပနျးမွဲ၊ အာရုံမစိုကျနိုငျဆဲ ဖွဈနဦေးမှာပါပဲ။
၄။ ထူးခွားတဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေို ဖနျတီးပါ။
ထူးခွားပွီး စိတျလှုပျရှားစရာကောငျးတဲ့ အရာတဈခုကို စမျးလုပျကွညျ့ပါ။ (တောငျတကျတာတို့၊ စှနျ့စားခရီးထှကျတာတို့ပေါ့) တဈခါမှမလုပျဖူးတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေ စိတျကူးသဈလေးတှကေို ပေးစှမျးနိုငျပွီး လုပျငနျးခှငျမှာ အိုငျဒီယာအသဈတှကေို ဖနျတီး လုပျဆောငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
ပိတျရကျတှမှော ပရဟိတလုပျခွငျးအားဖွငျ့ ကိုယျခငျြးစာစိတျတှေ၊ သညျးခံညှာတာမှုတှေ၊ လူမှုဆကျဆံရေးတှေ တိုးတကျလာစလေို့ လုပျငနျးခှငျ ဆကျဆံရေးမှာ အဆငျပွစေမှောပါနျော။ ပရဟိတကနေ သူငယျခငျြးသဈ၊ မိတျဆှသေဈတှလေညျး တိုးလာတော့ Network ကယျြလာနိုငျတာပေါ့နျော..
Related Article >>> လုပျငနျးခှငျမှာ ပြျောရှငျနိုငျဖို့ လြှို့ဝှကျခကျြမြား
၆။ သငျတနျးတဈခုခု တကျပါ။
ပိတျရကျတှမှော ကိုယျ့ဘဝအတှကျ တိုးတကျစမေယျ့ ပညာရပျတှေ၊ ဘာသာစကားတှေ၊ အလုပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဘာသာရပျတှေ စသဖွငျ့ ပညာရပျတဈခုခုကို သငျယူပါ။ ဒါဆို ပိတျရကျတှမှော ပညာသဈတှေ တိုးပွီပေါ့..
ဒါက ဗုဒ်ဓဘာသာမှ မဟုတျပါဘူးနျော… လူတိုငျး လုပျလို့ ရပါတယျ။ စိတျကို ပိုပွီး တညျငွိမျစသေလို အာရုံစူးစိုကျမှုလညျး ပိုအားကောငျးစပေါတယျ။ ရုံးဖှငျ့ရကျတှမှော ပငျပနျးလို့ မလုပျနိုငျဘူးဆိုရငျ ပိတျရကျတှမှော အခြိနျခဏပေးပွီး တရားထိုငျကွညျ့ပါ။ ဒီအခကျြလေးတှကေို ပိတျရကျတှမှော အခြိနျပေးပွီး လုပျမယျဆိုရငျ လုပျငနျးခှငျမှာ ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ အာရုံစိုကျနိုငျပွီး လုပျငနျးခှငျ အောငျမွငျမှုတှကေိုလညျး ဖနျတီးနိုငျပါလိမျ့မယျ ယောငျးတို့ရေ…
Tags: Career, experience, Family, holiday, peace, travel, work
မပေါ့ဆသင့်တဲ့ဝက်သက်ရောဂါ
ခရီးသွားဖို့ကြံစည်လိုက်တိုင်း ဂျင်းထည့်တတ်တဲ့ သူငယ်ချင်းကို ဘယ်လိုအပီချုပ်မလဲ
Phyu Thant February 25, 2019